Iningi labantu abahlala kuleli zwe lethu, kukhona amaKristu obu-Orthodox. Abaningi abaye bezwa, yiziphi oda oNgcwele uMbhishobhi, Metropolitan umbhishobhi. Kodwa, bambalwa abantu sibazi ngempela kusho, engaphuma, futhi yini imithwalo yemfanelo bonke laba bantu nayiziphathimandla zesonto. U-Archbishop - ubani lo? Kuyini lokhu isithunzi?
U-Archbishop - Ama-oda umbhishobhi sika. Igama lesiGreki wolimi futhi liqukethe amagama amaningana: άρχή - «ezinkulu», επί - «oku», σκοπος - «umnakekeli". Uma ukubeka ndawonye futhi elihunyushwe ngokoqobo, kusho "induna rangers." Nokho, igama elithi "umbhishobhi" lisuselwa lonke izwi επίσκοπος kusho "umbonisi. ' U-Archbishop - okubizwa ngokuthi "uhulumeni" degree of umbhishobhi, kulandela isikhundla - Metropolitan ngqo.
Umlando umsuka wenkulumo ethi
Lapho lo mbusi uConstantine le Ukuhlelwa kabusha kwezokuphathwa okubi okwakugcwele eMbusweni WaseRoma, ngalo lahlukaniswa laba izizinda ezine babenzé Elikhulu. Ngamunye wabo lalinabashumayeli the dioceses okuthiwa, okuyinto vele sasihlanganisa ithuba zezifundazwe. ama-apharathasi Civil luqondane ngokuphelele nesonto. Ngenkathi umbhishobhi - lena main umbhishobhi ditseza, njengoba lalibizwa kanjalo Exarch (ngesiLatini - umbambeli). Lokhu isikhundla ubumi sabaphathi ngemva inzalamizi - inhloko Prefecture, kodwa ngaphezu kwezihlalo Metropolitan. Kodwa abakulowo mbuso Eastern ngasekuqaleni isikhathi WaseByzantium, ekuqaleni kule Sabefundisi omkhulu waseConstantinople, izwi usezuze kunencazelo wesibili u-Archbishop. Leli gama laqala ukwaziwa ngokuthi i ababhishobhi, ogama esifundeni itholakala ngaphakathi archdiocese County, kodwa kwasuswa igunya ngqo Metropolitan futhi idluliselwe kwakuwukuthi inzalamizi. U-Archbishop waqala ukuba luthathe indawo diptych ingaphansi kwe-Metropolitan. Ekugcineni, lokhu kwaba umehluko phakathi isikhundla langempela umbhishobhi, futhi asiphathelene nomunye amandla athile onegunya kokumane ababhishobhi.
Ngo-Orthodox, kukhona abaningi abavelele izibalo ezingokomoya ezifana-Archbishop uLuka, owayengudokotela ngenxa yokholo lwabo baba yisisulu repressions kaStalin. Okwesibili Primate ka Lobu-Orthodox LaseRussia - Metropolitan Leonty, owayeneminyaka ingxenye Sabefundisi omkhulu waseConstantinople, ngokuvamile ebizwa nangokuthi umbhishobhi. Nokho, kamuva ngokuphelele zonke wezinkawu nabizelwa eRussia kakade basemasontweni. ERussia, umbhishobhi - isiqu kwaba zokuhlonipha kuphela, futhi kwaba neze exhunywe nanoma yimuphi ezengeziwe isimo Imisebenzi yombhishobhi zokuphathwa kanye namandla. Kusukela ngekhulu weshumi nambili, izwi waqala ngokuthi ababusi Novgorod. Khona-ke, ngokuvumelana isihloko okukhulunywe ababhishobhi kanye neminye iminyango: krutitskoy, Kazan, Rostov nabanye. U-Archbishop ULuka ubuye wathola isithunzi yesevisi wazo ongavamile eSontweni ezikhathini ezinzima.
Ezweni lanamuhla elisebenzisa ubuchwepheshe
Ezikhathini zanamuhla umbhishobhi - iyinhloko le Autocephalous Church. Kanye izinzalamizi, ngakho leli gama ngokuthi iConstantinople wezinkawu (uMbhishobhi Omkhulu okusha Rome - waseConstantinople), uMbhishobhi Omkhulu Tbilisi futhi Mtsehitsky (Georgian iSonto), uMbhishobhi Omkhulu PEC (Serbian iSonto Lobu-Orthodox) kanye Bucharest (Romanian Church). Ngendlela efanayo, futhi ngokuthi wezinkawu Amasonto ezizimele - Finland kanye iSinayi, kanye lulwimi ezizimele engumKrethe Church. Ngokuhambisana elisungulwe Russia isiko, elisezingeni umbhishobhi kuyinto umehluko zokuhlonipha, futhi lingaphansi kunalokhu isihloko Metropolitan. Ngokufanayo kunjalo, naseJerusalema, futhi Georgian Church. I ezizimele kanye autocephalous Amasonto umbhishobhi Kungenzeka ukuthi ugqoka izingubo isihloko njengoba isikhundla esilandelayo Metropolitan, okungukuthi yesibili. I Bulgarian Church of Alexandria kanye elisezingeni non-akukho.
Muslim Dua ukugcwaliseka izifiso. Kanjani ukufunda? Ingabe umuntu osiza?
Jobe sipho - kuyini?
Wamathambo esikoleni ubhaka okwesikhathi ibanga lokuqala: Uhlolojikelele amamodeli Izibuyekezo